မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
Tag Archives: မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်
Posted on February 19, 2016 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ပြီ နိဒါန်းပိုင်း အခန်း(၁) နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိတဲ့တရားပါ ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေက လက်ခံပြီးသားပါပဲ။ နိရောဓော အတ္ထိဆိုတာ နိဗ္ဗာန်က ရှိတာပဲ။ ရှိပေမယ့် ရှိတိုင်းမသိဘူး။ ဒါလည်း စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး သိပါတယ်။ ရှိတဲ့တရားနဲ့ သိတဲ့တရားက မတူဘူး။ ရှိတိုင်းလည်း သိတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်က ရှိတယ်လို့ သိနေပေမယ့်လည်း သိတိုင်းလည်း ဟိုမှာတကယ်မရှိဘူး ပျောက်ပျက်ရင် ပျောက်ပျက်နေတာ။ ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်ကတော့ တကယ်ရှိတဲ့တရား လူတွေက မတွေ့သေးလို့။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်မရသေးလို့၊ အရိယာမဖြစ်သေးလို့ မတွေ့သေးတာပါ။ အရိယာဖြစ်ပြီဆို တွေ့ပြီပေါ့။ ဒီတော့ … Continue reading →
Posted on December 7, 2015 by chitnge
ကြည်ညိုဖွယ်ရာသူတော်ကောင်းများ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ သူတော်ကောင်းများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အရိယာ သူတော်ကောင်းများသည် လွန်စွာကြည်ညိုဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းစွာ တရားဝင်စားလေ့ရှိကြသည်။”နိဗ္ဗာနံ အရဟတ္တောဂတိ” ဆိုသော စကားလည်းရှိသည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ရဟန္တာများ သက်ရောက်၏၊ လား၏၊ စံမြန်း၏ ဆိုသော အဆိုအမိန့်ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်သည် ကောင်းသောကြောင့် အရိယာ သူတော်စင်များ မကြာခဏဆိုသလို မျက်မှောက်ပြုကြ ၀င်စားကြသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် “နိဗ္ဗာနံ ပရမံ သုခံ” ဆိုသော စကားအတိုင်း မြင့်မြတ်သော ချမ်းသာခြင်း၏ တည်ရာဖြစ်သည်။ ထိုချမ်းသာခြင်းကို စံမြန်းတော် မူကြသော … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, ရဟန္တာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on September 15, 2015 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ဟာလောကုတ္တရာဓာတ်ပါ ယခုအခါမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာတယ်လို့ ၀န်ခံကြပေမယ့် လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာကို နားမလည်ကြဘူး — အဘိဓမ္မာသင်တန်း တက်ခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ခံပေမယ့်လည်း လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာကို နားမလည်ဘူး — လောကီဆိုတာ အပျက်ပဲ၊ ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဟာ နားလည်ရမှာပေါ့။ လောကုတ္တရာဆိုတာ ပျက်ရာမှလွန်ရာ၊ ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း နားလည်ရမှာပေါ့။ ပျက်တဲ့တရားက ပျက်တာကလွန်တဲ့ဆီကို သွားလို့မရဘူး။ အတိအကျကတော့ ရုပ်နာမ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို သွားလို့မရဘူး။ ဒါကို ရုပ်နာမ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်သွားချင်တယ် ဆိုပြီးတော့ တစာစာနဲ့ အော်နေတဲ့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, သာသနာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Posted on July 13, 2015 by chitnge
သိပ္ပံပညာတွေ့သည်ဆိုသည်မှာလည်းဘာမှမဟုတ်သေးပါ ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ မိန့်တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း — “ငါတို့ တိပိဋကတွေဟာ တံခါးခေါက်ယုံမျှသာပဲ…” ဆိုသော စကားကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေသည်။ သိပ္ပံပညာသည် (T.O.E) ဟုသာ ကြွေးကြော်နေသည်။ (T.O.E) ကို မရနိုင်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့မသိသော အရာများ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ — လောကုတ္တရာ ပညာရပ်များ နိဗ္ဗာန်၊ အရိယာ၏ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်များ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သိပ္ပံပညာသည် (T.O.E) ကိုမရနိုင်၊ (T.O.S) သာ ရနိုင်သည်ဟု စာရေးသူ တချိန်က … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on May 16, 2015 by chitnge
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသောအခါ — နိဗ္ဗန် မျက်မှောက်ပြုပြီးသောအခါ ထိုအရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရုပ်နာမ်၏ ဒုက္ခကိုပို၍ နားလည် လာတတ်သည်။ နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်နာမ် မရှိ၍ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်၏ ချမ်းသာခြင်းကို စံစားရသောအခါ ရုပ်နာမ်၏ အပြစ်ကို ပို၍မြင်လာတတ်သည်။ ရုပ်နာမ်သည် ဒုက္ခသစ္စာဆိုသော မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်အား ပို၍ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားနားလည် လာတတ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်ဖို့အတွက် ရုပ်နာမ်ကို စွန့်နိုင်ရလေသည်။ ရုပ်နာမ် မစွန့်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နိဗ္ဗာန် စံဝင်ဖို့အတွက် Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading →
Posted on May 14, 2015 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ဖက်ဆီကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ချဉ်းကပ်ကြည့်ရအောင် အခု (Indirect Method) ခေါ်တဲ့ တဆင့်ခံနည်းနဲ့ တင်စားပြီးတော့ ရှင်းလင်းဖော်ပြ ပေးပါမယ်။ ဥပမာဆိုပါစို့ – နိဗ္ဗာန်ဟာ သိမ်မွေ့တယ်၊ နူးညံ့တယ်၊ ကင်းဆိတ်တယ်၊ ချမ်းသာစစ်ရဲ့ တည်ရာဖြစ်တယ်၊ လွတ်မြောက်တယ်။ ဒီတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သူအရိယာဖြစ်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့အရိယာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါကျတော့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ချမ်းသာမှု လွတ်မြောက်မှုတွေကို သူဝင်စားပြီးတော့ တရားကို ဖြုတ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ တရားဖြုတ်ဖြုတ်ခြင်း သူဟာ ကိုယ်အမူအရာ နုတ်အမူအရာ ကြမ်းတမ်းပြီး ဒေါသတွေဖြစ်ရင် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on May 7, 2015 by chitnge
ကာလသုံးပါးမှလွတ်သည် ကာလသုံးပါးမှလွတ်သည် ဆိုသောစကားသည် လွန်စွာစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ အတိတ်မှ လွတ်လိုက လွတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် — အတိတ်သို့ ပြန်မတွေးနှင့် – ဤကိစ္စသည်ပင်လျှင် လွန်စွာခက်ပါသည်။ သို့သော် အတိတ်ကို ပြန်မတွေးနှင့် ဖြစ်လိုက ဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်မှ လွတ်သည်ဟုဆိုရာ၌ အတိတ်ကိုလည်း Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ
Posted on April 11, 2015 by chitnge
နိဗ္ဗာန်​သို့ချဉ်းနင်းဝင်​​ရောက်​ထိုး​ဖောက်​ရန်​ကြိုးစားခြင်း အပိုင်း(၇) နိဗ္ဗာန်ကို စာဖတ်သူများစိတ်ဝင်စားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်၊ သာဓုခေါ်တယ်။ မှန်ပါတယ် – နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားရမှာပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတို့ ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ နိဗ္ဗာန်ပဲ။ နိဗ္ဗာန်က ကောင်းမြတ်လွန်းတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်း ဂုဏ်ရှိတယ်ပေါ့။ နိဗ္ဗာန်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ နိ ၀ါဏ ဆိုတော့ တဏှာကုန်ရာပေါ့။ တဏှာကုန်တယ်ဆိုတော့ တဏှာကုန်တဲ့ဆီကို ၀င်ဖို့ဆိုတာက တဏှာ့ကျွန်က မလွယ်ဘူးလေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် တဏှာ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့ ရုပ်နာမ်က မလွယ်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်သွားနည်းက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဒီကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းကလာတဲ့ ဒီ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Approaching Nirvana (2)
Posted on March 30, 2015 by chitnge
Approaching Nirvana (2) We all admit that it is intricate to give clear definition of Nirvana. The reason is that Nirvana is the world beyond. All terms we now have are only relevant for this world. Nirvana is related to … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged English Posts, Magga Nyanna, ဖိုလ်ဉာဏ်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on March 28, 2015 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ဖက်ဆီသို့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ထိုးဖောက်ရန်ကြိုးစားခြင်း သစ္စာဝါဒီများ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်ကို ကျင့်တယ်ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကျင့်တဲ့ သဘောပါပဲ။ သစ္စာါဒီများ အခုကျင့်နေတာဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကျင့်နေတာပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းတော့ ပြောပြထားချင်တယ် — နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ (နိဝါန) က လာတာပါ။ အားလုံးလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာမှာ။ နိဆိုတာ မရှိခြင်းနဲ့ ၀ါနဆိုတာ တဏှာအစေးပဲ – ဒီတော့ တဏှာအစေးမရှိခြင်းလို့ ယူရင်ရပါတယ်။ တဏှာအစေး မရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို သွားချင်ရင်တော့ တဏှာစေးရှိတဲ့ ရုပ်နာမ်နဲ့တော့ သွားလို့မရဘူး (ဒါ သစ္စာဝါဒီများလည်း အသိပဲ)၊ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on December 20, 2014 by chitnge
ဝိပဿနာနှင့်အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ အပိုင်း(၃၀) သစ္စာဝါဒီများ တရားလိုက်စားလို့ အထူးသာဓုခေါ်မိပါတယ်၊ လိုက်စားပါ။ အမှန်အကန် ပြောပြတာကို အမှန်အကန်လို့ နားလည်ကတည်းကိုက သစ္စာဝါဒီများဟာ ပါရမီရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွက်လို့ရပါတယ်။ အပြင်မှာတော့ အမှားအယွင်းတွေလည်း ပြောကြတယ်၊ တစ်ချို့က ရုပ်နာမ်ချုပ်ပြီးရင် ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ အကြိတ်အနယ် ဟောကြပြောကြ ဆွေးနွေးကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ — မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူခဲ့တယ်၊ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ — အတ္ထိဘိက္ခဝေ အဇာတံ အဘူတံ အဂတံ အသင်္ခတံ – စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ချစ်သားတို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment